Sidee Calaamadaha Calaamadaha iyo Suuqgeynta Dijital ah ay u badalayaan sida aan wax u iibsano | Martech Zone
Warshadaha suuqgeynta waxay si qoto dheer ugu xiran yihiin dabeecadaha aadanaha, howlaha joogtada ah, iyo isdhexgalka taas oo muujineysa ka dib isbedelka dhijitaalka ah ee aan soo marnay shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay. Si ay nooga sii mid ahaato, ururadu waxay kajawaabeen isbedelkan iyaga oo ka dhigaya istiraatiijiyado isgaarsiineed warbaahinta bulshada ee dhijitaalka ah qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshayaashooda suuq geynta ganacsiga, hase yeeshee uma muuqato in marinadii dhaqanka laga tagay.
Qalabka suuq-geynta dhaqameed sida boorarka, joornaalada, joornaalada, tv-ga, raadiyaha, ama xaashiyaha baalasha marketing digital iyo ololeyaasha warbaahinta bulshada ee gacmaha is haysta waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo sii wanaajin lahaa wacyigelinta sumcadda, macnaha, daacadnimada, iyo ugu dambeyntiina inay saameyn ku yeelato macaamiisha marxalad kasta oo ka mid ah hannaanka go'aan qaadashadooda.
Sidee ayey wax uga beddeleysaa habka aan wax u iibsanno? Bal hadda aan dhex marno.
Maanta, qayb weyn oo nolosheena ka mid ah ayaa ka dhacda boqortooyada dhijitaalka ah. Tirooyinka waa cad yihiin:
Maalintii ugu dambeysay ee 2020, waxaa jiray 4.9 bilyan oo isticmaale internet iyo 4.2 bilyan xisaabaadka firfircoon ee shabakadaha warbaahinta bulshada adduunka oo dhan.
Hagaha Goobta Koowaad
Markuu suuqa internetka horumaray, ayaa sidoo kale istiraatiijiyad suuqgeynta shirkadaha ay sameeyeen. Kacaankii dhijitaalka ahaa wuxuu u suurta galiyay in magacyadu ay si dhakhso leh oo toos ah ula macaamilaan macaamiisha, iyo sidoo kale isdhexgalka si loo isbarbardhigo alaabada iyo qiimaha, loo raadiyo talooyinka, la raaco ra'yiga sameeya, iyo alaabada la iibsado.
Qaabka aan u soo iibsano waxay ku eedeyneysaa caadi u isticmaalka internetka iyo tartiib tartiibinta aaladaha gacanta lagu qabto, sida la macaamilka ganacsiga bulshada, go'aan qaadashada, iyo wax iibsiga ayaa ka sahlan sidii hore.
Suuq Cusub, Suuq Cusub?
Haa, laakiin aan caddayno.
Istaraatijiyadaha wax ku oolka ah ee suuqgeynta, dhaqanka iyo dhijitaalka ah, waxay soo jeedinayaan in la garto baahiyaha bulshada, in la abuuro deeqo gaar ah oo wax ka qabta baahiyahaas, iyo in si hufan loola xiriiro xubnahooda si loo kordhiyo qanacsanaanta. In kasta oo joogitaanka khadka tooska ah ee bulshooyinka aan macquul ahayn in la diido, dijitaalku maahan dhammaan-iyo dhammaadka dhammaan suuq-geynta.
Hadaadan i rumaysanayn, qaado Mashruuca Cusboonaysiinta Pepsi tusaale ahaan. Sannadkii 2010, Pepsi-Cola waxay go'aansatay inay ka tagto xayeysiinta caadiga ah (ie xayeysiisyada telefishanka sanadlaha ah ee Super Bowl) si ay u bilaabaan olole ballaaran oo dijitaal ah, iyagoo isku dayaya inay dhisaan wacyigelin iyo inay la yeeshaan xiriir muddo dheer ah macaamiisha. Pepsi wuxuu ku dhawaaqay inay siin doonaan $ 20 milyan oo deeqo ururada iyo shaqsiyaadka fikradaha ka qaba adduunka inay ka dhigaan meesha ugu wanaagsan, xulashada ugu fiican ee codeynta dadweynaha.
Marka laga hadlayo kaqeybgalka, ujeedkoodu wuxuu ahaa mid lagu dhuftay! In ka badan 80 milyan oo cod ayaa la diiwaan geliyey, Bogga Facebook ee Pepsi helay ku dhowaad 3.5 milyan kooxaha, Iyo Koontada Pepsi soo dhoweeyay in ka badan 60,000 oo raacsan, laakiin ma qiyaasi kartaa waxa ku dhacay iibka?
Calaamadda ayaa lumisay ku dhowaad nus bilyan doolar oo dakhli ah, oo ka dhacday booskeedii dhaqameed ee ahayd lambarka labaad ee cabitaanka fudud ee Ameerika illaa lambarka seddexaad, oo ka dambeeya Diet Coke.
Xaaladdan gaarka ah, warbaahinta bulshada kaligeed waxay awood u siisay Pepsi inay la xiriirto macaamiisha, hagaajiso wacyiga, saamaynta dabeecadaha macaamilka, hesho jawaab celin, laakiin ma aysan kordhin iibinta waxa ku qasbay shirkadda inay qaadato, mar labaad, istiraatiijiyad badan oo kanaal ah oo ay ku jiraan dhaqameed tabaha suuq geynta. Maxay taasi noqonaysaa?
Gacan Dijital ah iyo mid Dhaqameed
Warbaahinta dhaqanka lama jabiyo. Waxa loo baahan yahay in la saxo waa isbeddelka maskaxeed ee doorka ay warbaahinta caado ahaan jirtay ay ahaan jirtay iyo kaalinteeda maanta.
Charlie DeNatale, Xagga sare ee Istaraatiijiyadda Warbaahinta Dhaqanka ee Isku laabma
Waxaan u maleynayaa in tani aysan run noqon karin, haddii kale, maxaan weli u arki doonnaa banaanka McDonald?
In kasta oo aan ugu yeerno mid dhaqameed, suuqgeynta caadiga ah waxay si isdaba joog ah isu beddeshay tan iyo xilligii dahabiga ahaa ee raadiyaha iyo wargeysyada, iyadoo loo maleynayo inay hadda tahay door aad u kala duwan. Waxay ka caawineysaa in la beegsado xubnaha kala duwan ee qoyska, si loo gaaro dhagaystayaal gaar ah iyada oo loo marayo joornaalada khaaska ah, barnaamijyada tv-ga, iyo wargeysyada, waxay gacan ka geysaneysaa abuuritaanka dareen adag, kalsooni, iyo aqoon u leh astaanta, iyo in la dhiso jawi la jecel yahay oo ku xeeran sida si fiican.
Maaddaama dijitaalku caddeeyo inuu muhiim u yahay astaamaha si ay ula jaanqaadaan suuqa weligiis isbeddelaya, mid dhaqameedku wuxuu noqon karaa hub lagula dagaallamo dareenka dadka ee sii yaraanaya, taas oo awood u siineysa qaab shaqsiyeed oo dheeraad ah, maadaama liistooyinka billaha ah ay tusaale u yihiin. In kastoo qaar ka mid ah u baahan karaan saameyn wax ku ool ah si ay u go'aamiyaan iibsashadooda, kuwa kale waxay u aaneyn karaan kalsooni dheeraad ah maqaal wargeys.
Markaad ka shaqeyneyso tandem, suuqyada dhijitaalka ah iyo kuwa suuq geynta dhaqameedku waxay isu keenayaan labada dhinac ee macaamiisha, iyagoo gaara macaamiil badan oo macquul ah taasoo u horseedi karta macaamil isku mid ah iyo madaxbannaan oo dakhli kordhin ah. Sahaminta mid iyo tan kale waxay kordhineysaa fursadda in dhagaystayaashu ku sii dhexjiraan sumadda “xumbada saamaynta” waxayna si wax ku ool ah u saameyneysaa safarka go'aanka macaamilka.
Joogitaanka dijitaalka iyo bulshada oo ay weheliso aaladaha mobilada ayaa si aad ah u qaabeynaya habka aan wax u iibsanno, iyadoo ku riixeysa bini'aadanimada xagga dukaamaysiga internetka, laakiin jawaabta isbeddelkaasi waa istaraatiijiyadaha suuq-geynta ee kanaalka badan, oo ay ku jiraan dhexdhexaadiyaal dhaqameedka oo saameyn ku leh geedi socodka iibsiga oo dhan. Isgaarsiinta marinnada kala duwan, shirkadaha waxay xaqiijinayaan inay ka sii dhib badan tahay baxsashadu xumbo saamayn taasi waxay saameyn ku yeelan kartaa marxalad kasta oo ka mid ah safarka macaamiisha laga bilaabo soo kicinta rabitaanka ilaa iibsashada kadib.
Tags: dusha sareCharlie denatalemarketing digitalpepsipepsi mashruuc cusbooneysiinMedia Social Suuqsuuq dhaqameedka
Sidee Ayaan Ugu Hormariyey Sawiradayda Muusigsan ee Warbaahinta Bulshada iyo Kordhinta Isku Socodka Bulshada 30.9%